Ukucushwa kwe-DA-7 A3-standard 1.Constant Height Head Ends: Ukulungiswa kwekhanda okuphakeme okulungiselelwe kwenza ukufinyelela okusheshayo nokulula kwekhanda lesiguli, intamo ne-thorax. 2.Split Side Rail: The 4pcs PP Railways kutoa isiguli isivikelo ekuweni. 3.Removable Mattress Platform: Ipulatifomu leMatress liyi-phenolic resin board okungaba lula ukuyisusa futhi kube lula ukwenza inzalo. Ipulatifomu yomatilasi ingenza i-X-ray ngebhodi elingemuva futhi inikeze isiguli ukuthi sikhululeke kakhudlwana. 4.Central Nurs Control S ...
Ukucushwa kwe-DA-7 A2-standard 1.Constant Height Head Ends: Ukulungiswa kwekhanda okuphakeme okulungiselelwe kwenza ukufinyelela okusheshayo nokulula kwekhanda lesiguli, intamo ne-thorax. Imizila ejikelezayo ye-2.Split: Imigwaqo eseceleni ye-4pcs PP ihlinzeka isiguli ngokuvikelwa ekuweni futhi ezintanjeni ezengeziwe ezingama-2 ama-pcs aseceleni kwebhodi lezinyawo zinikeza insizakalo yokuphepha futhi ihlinzeka nokusekelwa ngesikhathi sokuma kwesiguli. Isistimu engu-3.Integrated Scales system: Iphaneli yokulawula izikali in-umbhede etholakala ngaphansi komphetho wonyawo ivikelekile emitheleleni ...
Ukulungiswa kwe-DA-7 A1-standard 1.Split Side Rail: The Rpcs PP Rail sideways kutoa isiguli ukuvikela ekuweni futhi i-2 pcs eyengeziwe imigwaqo eseceleni eseduze kwebhodi yezinyawo inikezela kakhulu ngokuphepha futhi ihlinzeka nokusekelwa ngesikhathi sokuma kwesiguli. Isistimu ye-ScIIntegrated Scales: Iphaneli yokulawula izikali ezingaphansi kombhede ngaphansi kwesiqalo sonyawo ivikelekile emiphumeleni. I-3.Removable Mattress Platform: Ipulatifomu leMatress ngamabhodi epulasitiki angakhishwa kalula futhi kube lula ngawo ukubulala inzalo ...